घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलनहर इस्तानबुल जोनिंग समस्या बढ्दछ!
13 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 इस्तांबुल, साधारण, च्यानल इस्तांबुल, राजमार्ग, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की 0
कानल इस्तानबुल परियोजनाको टेंडर मिति दुर्भाग्यवश 2019 को अन्त्यमा आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएको थिएन। यस क्षेत्रलाई एक आरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषित गरेपछि, क्षेत्र समस्या बढ्दो छ जब यस क्षेत्रमा अचल आप्रवासीहरू पीडित छन्!
कनाल इस्तानबुल परियोजना एजेन्डामा जारी छ।
कर्नल इस्तानबुल परियोजनाको भर्खरको अवस्था के हो, जसलाई राष्ट्रपति एर्दियन आफैले भनेका छन् "मेरो सब भन्दा ठूलो सपना हो र यो विश्वभरि पछ्याईरहेको छ किनकि यो गणतन्त्रको इतिहासको सब भन्दा ठूलो परियोजना हो?"
च्यानल इस्तानबुल टेन्डर मिति घोषणा?
होईन, दुर्भाग्यवश, कनाल इस्तानबुलको टेन्डर मिति अझै घोषणा गरिएको छैन।
नोभेम्बर 2018 UM मा पर्यावरण र शहरी योजना मन्त्री Murat Kurum द्वारा घोषणा गरिएको च्यानल इस्तानबुल परियोजना, पहिलो उत्खनन मेडी हिट हुनेछ, अपेक्षित शुभ समाचारमा आएको छैन।
यद्यपि एक्सएनयूएमएक्स वर्ष तोकिएको अवधि भन्दा बढी हुनेछ, तर कनाल İ इस्तंबु परियोजनाको टेन्डर मिति अझसम्म घोषणा गरिएको छैन।
च्यानल इस्तानबुल हुनेछ, परियोजना रद्द गरियो?
च्यानल इस्तानबुल प्रोजेक्ट रद्द गरिएको थियो, यद्यपि यो समाचार प्रेसमा बारम्बार देखा पर्‍यो, यस मुद्दाको बारेमा दावीहरू जहिले पनि अधिकारीहरूले अस्वीकार गरे।
वातावरण र शहरीकरण मन्त्री मुरत कुरुम र यातायात र पूर्वाधार मन्त्री काहित तुर्हानले दिएका बयान पछि राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोनले भने कि यो परियोजना हुनेछ र यो रद्द हुने छैन।
च्यानल इस्तानबुल रिजर्व क्षेत्र निर्णय सिर्जना संकट।
वातावरणीय र सहरीकरण मन्त्रालयले जारी गरेको आरक्षित क्षेत्रको निर्णयले यस क्षेत्रका अचल व्यक्तिहरूलाई दु: खित गरेको छ किनकि यो टेंडर हालसम्म राखिएको छैन। (emlakxnumx)
च्यानल इस्तानबुल पीडित: 'बिस्तृत बनाउने हो भने जोनिंग निर्णय!' 28 / 08 / 2019 उत्कट राम्ररी गर्न च्यानल इस्तानबुल परियोजना टर्की सबैभन्दा ठूलो परियोजना मा नवीनतम घटनाहरु के हुन्? जब च्यानल इस्तानबुल टेंडर आयोजित हुन्छ, च्यानल इस्तानबुल आयोजित हुनेछ, परियोजना रद्द हुनेछ? कनाल इस्तानबुल परियोजनाको लागि रोचक प्रतीक्षाको क्रम चलिरहेको छ, यो निराशाजनक छ कि यस परियोजनाको सहि निविदा मिति घोषणा गरिएको छैन। नागरिक विद्रोह हो! नहर इस्तानबुलको मार्गमा जग्गा वा अचल सम्पत्ति भएका नागरिकहरूले अझै परियोजनाको लामो बर्षको अवधि भए पनि सहि निविदा मिति घोषणा नगरिएको तथ्यप्रति प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। किनकि यस क्षेत्रको विकासको लागि खोलिएको छैन, यस क्षेत्रमा अचल सम्पत्ति भएका नागरिकहरूले बिक्री वा लीज लिन सक्दैनन्।
ESHOT समस्या TOKI मा बढ्छ 14 / 02 / 2017 टोकियोमा ESHOT समस्या बढ्दै गएको छ: IZBAN यातायात, किनकि तिनीहरूले नागरिकों को लागी कुनै लाभ देख्न नसक्ने, मिनिबस प्रयोग गर्न निर्देशन दिए। यातायात नागरिकको लागत बढाउने, 'डोमोमुस्कुलुलर कोकोओग्लु'नन मूर्ति मूर्ति डटर्मेली' उनले बोक्सेल्लरलरको टेकको निवासमा प्रतिक्रिया दिए। आईजानका बासिन्दाहरूको आगमनमा ट्राफिक फर्केर फर्किए। कठिन समयको कारणले गर्दा समस्याको कारण आईजीबीईका निवासीहरू IZBAN लाइनको कुनै पनि प्रयोग देख्न पाउँदैनन्। नागरिकहरूले XZUMX ESHOT हटाउन को लागी İZBAN को प्रयोग गर्न को लागी निन्दा गरे TOKİ घरहरु बाट गुजरने बस बाटो जुन समय र वेतन दुवै पीडा हुन्छ। बासिली सदरमुकामका नागरिकहरूका लागि, अब सिस्टर्न पुग्न एक घन्टा भन्दा बढी छ जहाँ उनीहरूले मिनेटमा 809 सम्म पुग्छन्।
इस्तांबुल विमानस्थललाई मार्नु पर्नेमा मार्नुहोस् 07 / 02 / 2019 ट्राफिक एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको मंत्री कहाट टरहानले सूचना प्रविधि प्राधिकरणमा आयोजित प्रेस कन्फिगरेसन प्राधिकरणमा "2018 वर्ष मूल्यांकन र 2019 वर्ष लक्ष्य" मा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिनुभयो। वर्षको पहिलो महिनामा 29 एयरपोर्टबाट 2018 मा खोलियो। उनीहरूले भने। टर्हानले भने कि इस्तांबुल विमानस्थलले अहिले5बिन्दुलाई उडान गर्दछ र हवाईअन्तर्गतको स्थानान्तरण अक्टोबर 19 को रूपमा सुरु भएको छ। टोरानले उडानको संख्या दिन दिन बढ्यो, कम्पनीले सेवा गर्न उत्प्रेरित भने भने कि हिड्ने प्रक्रिया। यसो भन्छ कि यो वर्षको मार्चमा यो कदम पूरा गरिनेछ, टोरानले भन्नुभयो
इस्तांबुल विमानस्थलमा दुई मेट्रो लाइनहरूको लागि निर्माण योजना स्वीकृत 19 / 02 / 2019 इस्तांबुल महानगरीय नगर पालिका परिषद, इस्तांबुल एअरपोर्ट - जुन फेब्रुअरीमा इस्तांबुल एयरपोर्टमा यातायात प्रदान गर्नेछHalkalı र गेरेटेपेइ-इस्तांबुल एयरपोर्ट, नयाँ विकास योजनाहरू अनुमोदन गरियो। आईएमएम विधानमा प्रस्तुत गरिएको रिपोर्ट थियोHalkalı लाइनको सम्बन्धमा बनाइयो; "इस्तांबुल एयरपोर्ट-Halkalı Vezneciler-Arnavutköy मेट्रो लाइन मार्ग, जुन मेट्रोपोलिटन नगर पालिकामा निर्माण भएको छ, फेनर्टेप स्टेशनमा बन्द गरिनेछ। दुवै लाइनहरू फेनर्टेपि स्टेसनमा एकीकृत हुनेछन्। प्रोज पारंपरिक स्पोर्ट्स सेन्टर प्रोजेक्ट ılan को ध्यान मा राखेर इस्तांबुल महानगरीय नगर पालिका र 'ओलिम्पिएटीको स्टेशन एस्किल्ल', ओलिम्पिटिको स्टेशनको स्थानबाट निविदा गरिएको थियो; लम्बाइ, योजना र योजना
इस्तांबुलमा 10 जिल्लामा नयाँ Zoning योजना व्यवस्था 17 / 07 / 2019 इस्तांबुलको 10 जिल्लामा नयाँ zoning योजना व्यवस्था निलम्बित गरिएको छ। 10, इस्तांबुल महानगरीय नगर पालिका द्वारा निलम्बित, दिन को लागि निलम्बित गरिनेछ जिला मा नयाँ zoning योजना को व्यवस्था को निलंबित गरिए पछि। 30 बाउरामपाका, इसुस्सुल, कडकको, कुककुककेम, मल्टेपे, अटेशिरिर, अरुणावाकोको र बकाकेशहर जिलहरुमा नयाँ जुन्टिङ योजना व्यवस्था, जुन जुलाईमा निलम्बन गरियो, अगस्तमा निलम्बित गरिनेछ। 12 जुलाईमा एसेनलर जिल्लाको नयाँ जेसिङ योजना निलम्बन गरिएको थियो। निलम्बन प्रक्रिया अगस्तमा 12 द्वारा पूरा गरिनेछ र निलम्बन बन्द हुनेछ। निलम्बन प्रक्रियाको बेलामा इस्तांबुलका जिल्लाहरूमा नयाँ जुर्निंग नियमहरू निलम्बन गर्न सकिन्छ। जबसम्म कुनै विवाद छैन ...
च्यानल इस्तानबुल पीडित: 'बिस्तृत बनाउने हो भने जोनिंग निर्णय!'
ESHOT समस्या TOKI मा बढ्छ
इस्तांबुल विमानस्थललाई मार्नु पर्नेमा मार्नुहोस्
इस्तांबुल विमानस्थलमा दुई मेट्रो लाइनहरूको लागि निर्माण योजना स्वीकृत
इस्तांबुलमा 10 जिल्लामा नयाँ Zoning योजना व्यवस्था
युरोपेली बैंकको पुनर्निर्माण र विकास (ईआरआरडी) ले मेक्सिको रेलवे को सुधार को लागि परियोजना को लागि ऋण प्रदान गर्नेछ
TCDD ले ऐतिहासिक प्रायद्वीप को संरक्षण को लागि मास्टर प्लान मा स्वीकृत गरेको छ
युरोपेली बैंकको पुनर्निर्माण र विकास वित्त ईआरआरडी डिपप्रोप्रोरोस्क मेट्रो प्रोजेक्टको लागि
Üsküdar जिल्ला, हरम जिल्ला र हैदपापसा पोर्ट फिर्ता क्षेत्र मास्टर योजना
Derince पोर्ट को लागि Zoning परिवर्तन